Qareenka Assange ayaa dalbaday in aan la xidhin Assange - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Qareenka Assange ayaa dalbaday in aan la xidhin Assange
La daabacay onsdag 3 maj kl 10.09
Julian Assange, aasaasaha bogga wararka ee Wikileaks.
Qareenka udoodaya ninka aasaasay bogga wararka ee Wikileaks ayaa maanta ka dalbaday maxkamadda Stockholm in ay si degdeg ah u qaado go´aanka ay Sweden ku doonayso in lagu soo xidho aasaasaha Wikileaks.
Sabta ugu weeyn ee uu garyaqaan, Per Samuelsom cugsanayo ayaa ah in waddanka mareeykanku hada si cad u sheegay in ay rabaan in la xidho Julian Assanges, aasaasaha Wikileaks. Samuelson ayaa ku dooday in loo bahan yahay in la sameeyo qiimaayn cusub sabta oo ah in ay hada jirto khatar ah in Mareeykanku doonayo in loo soo dhiibo Assange, sida ay daabacday wakaalda wararka Sweden ee TT.
Sweden ayaa doonaysa in Assange loo soo dhiibo si maxkamad loo horkeeno, ayada oo loo haysto in uu geystey denbiyo kufsi ah sanadkii 2010. Assange waxa uu magangelyo ka helay safaarada Ecuador ee London halkaas oo uu ku jiro laga soo bilaabo sanadkii 2012. Qareenka Assange waxa uu sheegay in hadii Sweden joojiso go´aanka ah in la soo qabto Assange uu suurtogal u heli lahaa in uu u haajiro waddanka Ecuador halkaas oo uu xoriyad dheeraad ah ka heli lahaa.